Xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in ay dar dar gelineyso Howl gallada ka dhanka ah Al Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in ay dar dar gelineyso Howl gallada ka dhanka ah Al Shabaab
MAREEG 21 August 2015
Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo shalay booqday Magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa sheegay in la sii dar dar gelinayo Howl gallada ka dhanka ah Al Shabaab ee Gobollada Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Wasiir Diini ayaa xusay in Howl galladu marayaan heer gaba gabo ah islamarkaana dhawaan gebi ahaan gacanta dowlada iyo Maamul Goboleedyada soo geli doonaan deegaanada Al Shabaab ay gacanta ku hayaan.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wada howl gallo xoog leh oo ka dhan Saldhigyada Al Shabaab ee deegaanada dalka kuwaas oo qaarkood Al Shabaab looga qabsaday meelaha ay ku sugan yihiin.
Ogeysiis Ku Socda Ganacsatada iyo Shirkadaha Badeecooyinka Dalka Keena
Tababar loogu soo xirayay qaar ka tirsan saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyed.